Kuveyt Menkul | Nagu Saabsan
Maaddaama waxqabadka Kuveyt Global ee Suuqa Dhaqaalaha, oo bilaabmay 2007, ay gaareen heerkii ugu sarreeyay labadii sano ee la soo dhaafay iyada oo la kordhinayo maal-gashadeheeda maal-gashiga ah iyo maal-gashiga maalin kasta, waa hormoodka maalgashiga ee qaybta iyada oo la kaashanayo taageerada shirkadaha Suuqyada Caalamiga ah iyada oo la isku darayo khubarada Maal-gashiga Maal-gashadayaasha iyo La-taliyayaasha leh kaabayaasheeda farsamada. Kuwait Globalin waa shirkad maalgashi oo ku taal suuqyada Finansala.
MAXAA LOOGU MAAL GASHAY KUWAIT?
Inagoo siineyna tayada adeegga ugufiican maalgashadaasheena aragtideena mustaqbalka iyo taageerada dhaqaale ee xoogan, marwalba waxaan nafteenna u furnaandoonaa hal-abuurnimo iyo horumar iyadoo aan laheleyno jawaab celinta aan kaheleyno waaxyadeena tayada leh.
Waxaan ku soconaa wadadii shirkad hogaamineysa anagoo siineyna adeegyo badan oo muuqda suuqyada maaliyadeed maalgashiyaasheena sida ugu dhaqsaha badan. Heerarka Fidinta / Is-dhaafsiga Tartanka
17+ Qalabka maalgashiga
24/7 socodka socodka
Himiladayada iyo Himiladayada
Kuwait Investment, oo ah laanta Kuwait Global, oo hormuud u ahayd waaxda sannado badan, ayaa ujeedadeedu tahay inay hoggaamiso waaxda iyada oo ku ballaarinaysa shabakadeeda maalgashadayaasha suuqyada maaliyadeed ee qaybta iyada oo leh kaabayaasheeda tikniyoolajiyadeed ee adag.